ONYE E NWE ENWE JI ABALỊ AGỌ ỌFỌ
Thu, 08/04/2016 - 13:07 | Site Manager
Oge ụfọdụ ọ dịghị mma mmadụ ime ihe ga-alapụta ya ebe ndị ọ na-agbara obodo nọ. Mana n’ogo nke Nigeria, ndị ọchịchị echeghi na ha nọ n’okpuru ndị ha na-achị. Nke a mere ha ji eme ihe sọrọ ha n’atụghị egwu ndị mmadụ ahụ tinyere ha n’ọkwa ọchịchị. Mana o kwesiri na ọ bụrụgodu na ha na-ezu maọbụ na-emebi ihe ndị mmadụ, ha na-eme ya na nzuzo. Maka na onye e enwe enwe ji abalị agọ ọfọ. Ọzọ, odibo ma ihe kwesiri ịkpachapụ anya n’ebe na oge ọ na-agbara nna ya ukwu maọbụ nne ya ukwu odibo, ka o were nweta ihe dị ya mkpa site n’aka nna ya ukwu maọbụ nne ya ukwu ahụ.